အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်စား ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှ ထိုင်းနိုင်ငံ SENIOR COLONEL RUENGRIT BUNYAT. DEPUTY CHIEF OF OFFICE OF ASIAN AFFAIRS ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် လုပ်ငန်းအပြီးသတ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်တင်အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါ သံအမတ်ကြီး H.E. MR. MARK MCDOEWLL ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်တင် ပြင်သစ်သုတေသီ DR. RENAUD EGRETEAU အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့ အစည်းအဝေး
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏၂၅. ၁၁. ၂၀၁၄ ရက်နေ့ အစည်းအဝေး